Ururka Al-shabab oo dawladda Kenya ugu cago-jugleeyey in ay ku qaadi doonaan weerero ay ka qoomamayso. – Radio Daljir
Oktoobar 28, 2012 2:44 g 0
Somalia, Oct 28 -Ururka Al-shabaab ayaa soo saaray hanjabaado digniineed oo ku wajahan dawladda Kenya kuwaasi oo muujinaya maaganaanta weeraro ay ka fuliyaan gudaha, xilliyada soo aaddan sida ay tilmaameen.
Warkaan Al-shabaab, oo lagu shaaciyey bar-internet oo ay iyagu leeyihiin, ayaa lagu xusay Al-shabaab in ay ka go’an tahay sidii ay uga aar-gudan lahayd dawladda Kenya, oo qayb ka ahayd duullaanno deegaanno muhiim u ahaa looga fara-maroojiyey.
Hadalkaan hanjabadda ah ee lagu shaaciyey internetka Al-shabaab, ayaa ku celcelinayey dawladda Kenya in ay ka qoomamayn doonto, soo galiddii gudaha Soomaaliya, iyo la dagaallamiddii Al-shabaab.
Horay ayaa hanjabaado kuwaan oo kale ururka Al-shabaab ugu soo direen dawladda Kenya, gaar ahaan intii ciidamada Kenya ay cagaha dhigeen carriga Soomaaliya, waxaana inta badan saraakiisha amniga ee Kenya hadalka Al-shabaab ay ku tilmaamaan war goodi ah oo aan ka weecin doonin dhabbaha ay hayaan.
Taliyihii guutada 5-aad ee Sh/hoose Gen. Maxamed Ibraahim Faarax oo maanta lagu dilay meel u dhaw Marka.